विदेशमा हजारौँ नेपाली अलपत्र, कहिले होला उद्धार ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » विदेशमा हजारौँ नेपाली अलपत्र, कहिले होला उद्धार ?
विदेशमा हजारौँ नेपाली अलपत्र, कहिले होला उद्धार ?
बेखर्ची अवस्थामा सकसपूर्ण क्वारिन्टिनमा बसेकाहरु लामो समयदेखि सरकारले स्वदेश फर्काउन देखाएको आशासँगै निरास बनेका छन् । तर, अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो सरकारलाई हारगुहार गर्दासमेत स्वदेश फर्किन नपाएको आक्रोश विदेशमा अलपत्र बनेका श्रमिकहरुमा बढिरहेको छ । अन्य देशहरुमा पनि त्यस्तो प्रदर्शन र असन्तुष्टिको आक्रोश देखापर्ने जोसखम बढेको विदेशस्थित दुतावासले नै बताउँन थालेका छन् । दुबईस्थित दूतावासका एक अधिकारीले भने– “विभिन्न क्याम्पमा उद्धार उडानको प्रतिक्षामा एकत्रित रुपमा बसिरहेका अलपत्र श्रमिकले साउदीको रियाद जस्तै शैली पछ्याउने अवस्था बढेको छ ।” सरकारले अलपत्र श्रमिकलाई फर्काउन ढिलाइ गरेपछि तीन हप्ताअघि दुबईमा कार्यरत श्रमिकहरुले सरकारलाई असहयोग गर्ने भन्दै अवैधरुपमा हुन्डीबाट पैसा पठाउने अभियान सुरु गरेका थिए । उनीहरुले सरकारलाई सहयोग पुग्ने रेमिटेन्स सेवा नै बहिस्कार गरे । विदेशमा लामो समयदेखी अलपत्र परेकाहरु दूतावासहरुविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे पनि एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर, विदेशमा अवैध हुन पुगेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने दाबी गर्छन । सरकारले अवैध रुपमा रहेका नेपालीलाई उद्धार नगर्ने नीति लिएकोमा असन्तुष्ट रहेका राजदुत पाण्डेले भने– मृत्यु भएको खण्डमा लास लैजान चार गुणा बढी तिर्छु भन्ने सरकारले श्रम गरेर आएको ज्युँदो श्रमिक देशमा फिर्ता लान्न भन्ने, यो त सरकारको गम्भिर गल्ती हो ।’ मलेसियाबाट श्रमिक फर्किंदा टिकट खर्च १ हजार ५९० रिंगेट (४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) र शव लैजानका लागि ४ हजार रिंगेट (एक लाख २० हजार रुपैयाँ) खर्चनुपर्छ । अर्कोतर्फ कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेर आएका श्रमिकलाई उपचार गर्न पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पैसा दिँदैन, नेपाल फर्किन टिकट खर्च दिँदैन । मृत्यु हुँदा मात्रै खर्च गर्ने यो कस्तो नीति हो ? साउदीका राजदूत पाण्डेले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले पनि सरकारले बनाएको उद्धार निर्देशिका अव्यवहारिक र जटिल भएको बताए । खाडी क्षेत्रको समस्या र ग्राउन्ड रियालिटी एउटा नेपालमा अर्कै निर्णय भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
सरकारले भद्रगोल तवरले गरेको उडानले पनि विदेशमा नेपाली फर्काउने काम सकसपूर्ण बनेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले ढिलो गरी फ्लाइट सेड्युल पठाउँदा मंगलबार साउदीबाट फर्किने तय भएका नेपाली आउनै पाएनन् । सम्भ्रान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको हङकङजस्ता गन्तव्यमा सरकारले नियमित उडान गरिरहेको छ । लेबनानजस्तो नेपाली श्रमिकहरुको संख्या धेरै रहेको देशमा सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि चार्टर्ड विमान पठाएको छैन । मंगलबार फर्किने तय भएका सेमास्को कम्पनीमा जागिर गुमाएका २५० भन्दा बढी नेपाली फर्किन नपाएपछि सरकार र दूतावासविरुद्ध नाराबाजी समेत भयो । साउदीको हमाद एयरपोर्टभित्र हो–हल्ला भएपछि साउदीले नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनी दिदा दूतावासले क्षमा माग्दै विवाद सल्ट्याउनुपरेको थियो । सरकारकै कमजोरीले भदौ २ गते नेपाली लिन दुबई पुगको नेपाल एयरलाइन्सको विमान रित्तै फर्किएको थियो । पर्यटन मन्त्रालय, सीसीएमसी र एयरलाइन्सबीच समन्वय अभावका कारण यस्ता धेरै घटनाहरु भएका छन्, नेपालीको स्वदेश फिर्तीको असहजताले झनै असन्तुष्टि र आक्रोश बढाइरहेको छ ।